Kugadzirwa kwevhidhiyo ndeimwe yeaya marongero ekushambadzira ayo anowanzo kuverengerwa pasi kana zvasvika kune ROI. Vhidhiyo inomanikidza inogona kupa chiremera uye kutendeseka kunosimudzira chiratidzo chako uye kusundira tarisiro yako kuchisarudzo chekutenga. Heano mamwe eanoshamisa manhamba ane hukama nevhidhiyo
83% yeavo vanoshandisa vhidhiyo vanotenda kuti vanowana yakanaka ROI kubva pairi ne82% vachitenda iri zano rakakomba
Iyo infographic inotaura zvakare nekugovera kwevhidhiyo yako kuti iwedzere maitiro ayo. Ini ndinoda kuti ivo vanogovana email uye email masiginecha senzvimbo huru yekusimudzira vhidhiyo yako. Imwe yekuparadzira sosi inobatwa zvishoma ndeye Youtube uye yekutsvagisa injini. Usakanganwa kuti kune nzira mbiri dzinogona kukanganisa kutsvaga kana iwe uchishambadzira kuburikidza nevhidhiyo:
Tags: mwero wekushandurwaemail vhidhiyoKubatanaakakosha mavhidhiyo metricsei kutichiyero roiRoyivhidhiyo mutengovideo distributionvhidhiyo emailvhidhiyo mhindurovhidhiyo kushambadziravhidhiyo kushambadzira mushandirapamwemavhidhiyo metricskuronga vhidhiyovideo roivhidhiyo kugovanavhidhiyo siginechamavhidhiyo manhambamaonero ekuverengaYouTube